Jimmy Fallon nemukadzi wake vakabatana pakati peguhwa redambudziko remuchato - Nhau
Kuru Blog Varaidzo Macelebs Nhau
Jimmy Fallon nemukadzi wake vanobatana pamwechete pakati peguhwa redambudziko remuchato
Getty Mifananidzo North America Getty Mifananidzo North America Rex USA Splash Nhau Rex USA Splash Nhau Goverana Tweet Pin Email
Dambudziko muparadhiso? Funga futi!
Kune chikamu chiri nani chegore rapfuura, runyerekupe rwemakakatanwa emuchato rwakaputirwa Jimmy Fallon nemukadzi wake angangoita makore gumi, Nancy Juvonen. NeSvondo, Ndira 8, Jimmy naNancy vakavharirwa pamberi uye mushure mekupedzisira nyeredzi yehusiku yakagamuchira 74th Goridhe Globes .
Vaviri ava vakatorwa mifananidzo vari-ruoko-pamahwendefa matsvuku uye mushure mezvekudyidzana kuMadeo kuWest Hollywood. Vaviri vakanyemwerera manheru ese.
Jimmy naNancy, shamwari yepedyo yaDrew Barrymore, vakaroora muna 2007 uye vakave nerunyerekupe rwekuti vakapatsanura kakawanda, kunyangwe munguva pfupi yapfuura segore rapfuura. MunaNovember 2015, paive nemishumo yekuti mudzimai wake nevatungamiriri veNBC vaishushikana kuti Jimmy aive kunwa zvakanyanya .
'Zvaenda kubva pakuita zevezeve kuenda kuchikurukura,' sosi yakaudza New York Post nezve nzira dzevatambi vehusiku-dzehusiku panguva iyoyo. Muna Gumiguru wegore iro, Jimmy akamhanyiswa kuchipatara mushure mekugumburwa nemukadzi nekucheka ruoko rwake mubhodhoro reJagermeister. 'Ndakanda bhodhoro ndokubva ndadzika pagirazi rakaputsika,' akaudza vateereri vake mazuva mashoma gare gare. 'Paive nemadziva eropa kwese kwese.'
Kwaive kukuvara kwake kwechitatu mumwedzi mina. MunaJune 2015, akapotsa afanirwa kuve neyake chigunwe chakatemwa mushure mekugumburwa pachirahwe. Pakutanga husiku akafoterwa nevateveri vanonwa waini vanoverengeka, zvichitungamira vazhinji kuti vatende kuti aive achifungawo manheru iwayo.
Mwedzi miviri gare gare, aive pachigaro chezvechiremba wemazino kwe zino rakatemwa .
'Iye nyonganyonga,' asingazivikanwe bartender weNew York uyo akashandira muenzi pamusoro pemakore. 'Ndinomuda ... Zvese zvamakanzwa [nezvehunhu hwake] ichokwadi.'
Mushure mekukanganisa kwemunwe wake, Jimmy akarega kupfeka ringi yake yemuchato paruoko rwake, asi akati akaramba achimuchengeta.
'Handifunge semhete,' akadaro, 'pamwe chishongo.'
NeSvondo, chaaigona kuwana chaive mukadzi wake anopenya.
Christina Anstead, Tarek El Moussa vanopemberera zuva rekuzvarwa kwemwanasikana Taylor pamwe nemusikana wake mutsva
Jenelle Evans akabatanazve nevana kune zuva rekuzvarwa kwemwanakomana
ndiani cara delevingne akaroora
eve nemurume wake mutsva
bruce jenner achidzokera kumurume
charlamagne tha mwari wendy williams
katy tur akavimbisa kuna tony dokoupil